HADINO : Miaina ao anatin’ny tsy fandriampahalemana ny ao Vangaindrano
Miaina ao anaty fitaintainana sy tebiteby andro aman’alina ireo mponina ao anatin’ny Distrikan’i Vangaindrano amin’izao fotoana izao. Fotoam-piakaran’ny vokatra jirofo izao any an-toerana ka tena mampirehitra ny tsy fandriam pahalemana. 2 janvier 2018
Tato anatin’ny roa volana nifanesy, dia voalazan’ny loharanom-baovao avy any an-toerana fa efa tsy latsaky ny folo izay ny olona maty novonoin’ny jiolahy mandritra ny fanafihana ataon’izy ireo. Amin’izany anefa dia saika ireo fianakaviana fantatr’izy ireo fa avy nivarotra vokatra no lasibatra na ihany koa ireo tokantrano mitahiry vokatra ao an-trano. Mazava ho azy fa na ny vola na ny vokatra no tena mahasarika ireo olon-dratsy mandritra ny fanafihana.
Kaominina iray ao anatin’ity Distrika ity no tena anjakan’izay asan-jiolahy izay kanefa saika ny Distrika iray manontolo no miaina ao anatin’ny tebiteby. Manodidina ny efatra arivo sy iray alina ariary ny vidin’ny iray kilao amin’ny jirofo amin’izao fotoam-piakarany izao ary ny fianakaviana isan-tokantrano any an-toerana dia mpamboly avokoa ny ankamaroany kanefa izay lasibatry ny tsy fandriam-pahalemana izao indray izay hany kely mba azo.
Manoloana izany indrindra no anaovan’ireo mponina antso avo amin’ny mpitandro filaminana sy ny tompon’andraiki-panjakana mba hijery akaiky ny tsy fandriampahalemana any an-toerana.